Isbeddelka Cimilada Dunida: Tamarta Mustaqbalka - Green Energy
1. Tamarta ilayska Qorraxda (Solar Energy): Ilayska Qorraxda oo loo beddelo koronto ayaa noqday tamar lagu isticmaali karo guryaha, gaadiidka, meheradaha, hay’adaha, warshadaha iyo wax walba oo adeegsiga tamar u baahan. Qabashada ilayska Qorraxda iyo u beddelidda koronto midna ma sababo shanqar wax dhibta iyo wasakh aafaysa deegaanka iyo hawadaba (pollution).
2. TAMARTA DABAYSHA (WIND ENERGY): Isticmaalka dabayshu ma ahan wax ku cusub bani-aadamka iyo adeegyada bulshooyinku u baahnaayeen qarniyo badan. Waxaa dabaylaha looga faa’iidaysan jiray safarrada badaha, soo saarista biyaha ceelasha, shiidista badarka, iyo waxyaalo kaleba. Hase ahaatee habka isticmaalka dabaysha ee waayahan dambe nagu cusubi waa dabayshii oo loo adeegsado dhalinta koronto.
4. TAMARTA HAYDAROJIINTA (HYDRGEN ENERGY): Haydarojiintu waa hawada ugu badan hawooyinka dunida, hase ahaatee inta badan ku dhex milan hawooyin iyo walxo kale sida biyaha (H2O), haydaro kaarboonnada, noolaha (xayaanka iyo dhirta) iyo walxo kaleba. Halkii moolikiyuul oo haydarojiin ahi waxaa uu ka kooban yahay laba atom, halkii atomna waxaa uu ka kooban yahay hal elekataroon(electron) iyo hal borotoon (proton). Tamarta haydarojiinta waxaa koronto ahaan loogu isticmaali karaa gaadiidka, guryaha, xafiisyada, qalabka elektaroonigga ah, warshadaha iwm. Haydarojiintu ma lahan midab, ur iyo dhadhan toona waana hawo aad u fudud.
6. TAMARTA KULKA DHULKA / GEOTHERMAL
Intaas oo qura kuma koobno siyaabaha loo heli karo tamar nadiif ah oo uu bani-aadamku ku beddesho shidaalka; islamarkaasna u yareeyo wasakhaynta deegaanka iyo atmosfeerkaba. Hase ahaatee waxaan u soo qaadannay siyaabaha kor ku xusan oo tamar la dhigto koronto loo heli karo; waa ayagoo aad looga sameeyay horumar, deegaammo badanina ku liibaaneen kagana raysteen shidaalkkii qaaliga ahaa.